Nahoana ny zaza latsaky ny herintaona dia tsy afaka misotro ronono
fahasalamana, Baby Health / From Poster
Ny ronono ombivavy, na dia manana toetra mahasoa maro aza izy, dia tsy ankasitrahan'ny ray aman-dreny maoderina amin'ny sakafo ho an'ny ankizy latsaky ny telo taona. Noho ny tsirony sy ny fahaizan'ny mahandro sakafo isan-karazany, maro ny olona tia sy mankasitraka ronono. Na izany aza, ny azy
Ahoana ny fomba hanampiana ankizy amin'ny gazikah ao amin'ny vavony?
Teraka ankizy! Fahasalamana sy ny piainana ny zaza tamin'ny voalohany volana eo amin'ny fiainana dia miankina amin'ny fikarakarana. Ny fitsapana voalohany dia afaka manomboka amin'ny reny any amin'ny hopitaly. Miresaka momba ny trangan-javatra mampalahelo toy ny gaziki. Ahoana, nahoana izy ireo no miseho sy ny fomba hanampiana ny zazakely vao teraka mba manala ny gaz fiara - miresaka momba izany amin'ny an-tsipiriany. Antony mahatonga ny fiara mitroka Fantaro fa ...
Ahoana ny fomba hanampiana ankizy amin'ny gazikah ao amin'ny vavony? Read full »
Rehefa nahita ny fomba nitondran'ity orthopedist ity ilay zazakely aho, dia taitra aho. Saingy taitra fotsiny aho!
fahasalamana, Baby Health, interesnenkoe / From Poster
Ity lahatsary ity navoaka tao amin'ny aterineto Neny, izay nandinika zazakely vao teraka iray amin'ireo dokotera matihanina ao amin'ny toeram-pitsaboana Ott any Saint-Pétersbourg. Saingy rehefa mijery ity lahatsary ity dia misy fihetseham-po tena mifanohitra. Ny fanontaniana dia hoe: io fitsaboana na fanesoana io ve? Rehefa hitanao izany, dia tsy te hiaraka amin'ilay zaza amin'ny orthopedist ianao. Mampahatsiahy ny fepetra fisorohana toy izany ...
Rehefa nahita ny fomba nitondran'ity orthopedist ity ilay zazakely aho, dia taitra aho. Saingy taitra fotsiny aho! Read full »
Ketaka amin'ny zazakely
Ny mahatonga ny kohaka amin'ny zazakely matetika indrindra (in 90% ny tranga) kohaka amin'ny ankizy dia famantarana ny Matsilo niparitaka be aretina taovam-pisefoana (Ari). Amin'ity tranga ity, ny areti-milaza zavatra mety ho dingana voafaritra ao ambony (orona, nasopharynx, oropharynx) ary ao amin'ny taovam-pisefoana ambany taratasy mivalona (lohatraoka, trachea, bronches, havokavoka). Iray hafa mahatonga ny kohaka amin'ny ankizy dia mety ho mamaivay ny taovam-pisefoana ambony taratasy mivalona (orona, sinuses, pharynx), ny fisian'ny ...
Ketaka amin'ny zazakely Read full »